Puntland Hal Qof Hal Cod: Riyo aan Dhamaan iyo Caqabado aan La Dersin -MAQAAL | Welcome to Lafweyne.com|
Puntland Hal Qof Hal Cod: Riyo aan Dhamaan iyo Caqabado aan La Dersin -MAQAAL
Aug 8, 2017 - Comments off
Puntland waxay soo gaartay wakhtigii laga dugbilahaa qaabka qabaa’ilka oo loo talaabsan lahaa wakhtigii qofkasta codkiisa dhiiban laha, waa wakhtigii hoos laga soo bilaabilahaa doorashooyinka oo lasoo dhilaan-dhilinlahaa nidaamka dimuquraadiyada, waxaan dhaqaale iyo wakhtiba gelindoonaa sida loosoo afjarilahaa qaabka qabaa’ilka ku salaysan ee Puntland ka jira maanta, waxaan dardar gelindoonaa geedi u socodka dimuquraadiyada, mudadda aan madaxweynaha ahayna waxay dhamaanaysaa iyadoo la gaaray wakhtigii qofkastaa dooran lahaa qofkii isaga metelilahaa” Waa hadalkii uu Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali gaas ka jeediyey Baarlamaanka hortiis maalin ka hor intaan loo dooran xilka Madaxweynenimada Puntland 2014.
Laga soo bilaabo asaaskii Puntland ee 1998, waxay madaxda iyo shacabka reer Puntland ku taamayaan in ay hirgeliyaan gaaraana nidaamka hal qof hal cod (Nidaamka Asxaabta Badan) kaasoo lagu soo dooranaayo saraakiisha xafiisyada dawladda (Public Officials) laakiin waxaynu ognahay 19 sano ka dib in aan weli arintaas la gaarin oo ay keliya ku hartay balan qaadyo ka yimaada madaxda Dawladda xilliga ay ku jiraan olalayaasha doorashada.
Hadaba, maqaalkaan waxaan ku eegidoonaa maxay yihiin caqabadaha hortaagan in Puntland gaarto hal qof hal cod? Maxaa loo baahan yahay si Puntland u gaarto hal qof hal cod? Maxay tahay faa’iidada aan ka dhaxli karno nidaamka hal cod hal qof? Iyo Talo Soojeedin
Hadaan sameeyo hordhac kooban oo ku saabsan isku dayadii ugu dameeyey ee ku saabsan nidaamka asxaabta badan ee Puntland.
Xukuumaddii Madaxweyne Faroole ayaa isku dayday sanadkii ugu damaysay muddadeedii in ay fuliso nidaamka asxaabta badan kaasoo dhamaan dadwayenuhu u arkeen in aysan suurta gal ahayn in nidaamkaas la fuliyo muddada dawladu haysatay oo yarayd owgeed. Isku daygii xukuumadii Faroole ee nidaamka asxaabta badan waxay dhalisay dhibaatooyin badan oo isugu jiray dhimasho, dhaawac dad iyo burbur hantiyeed, waxaa meelo badan lagu gubay sanaadiikhdii doorashooyinka halka meelaha qaarna aysanba gaarin.
Ka dib markii ay ku Xukuumaddi Faroole ku fashilantay qabashada doorasho hal qof iyo hal cod ah sanadkii 2013, ayaa waxa doorashadii 2014 lagu galay nidaamkii hore ee Baarlamaanka, wuxuuna madaxweynihii la doortay (waa kan hada joogee) balan qaaday in aan mar dame lagu soo dooran doonin madaxweynaha Puntland nidaamka Baarlamaanka loona gudbo nidaamka asxaabta badan ee ah “ Hal qof hal cod”, taasoo hada aan waxba kasoo naasa cadayn.
Taariikhdu markay ahayd 15 Febaraayo 2016 ayaa Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas si rasmi ah ugu dhawaaqey qayb kamid ah guddiga doorashooyinka Puntland. Sida uu qabo Dastuurka Puntland Madaxweynuhu waxa uu sharci u lee yahay in uu soo magacaabo 5 xubnood halka afarta xubnood ee kale ay soo magacaabayaan Golaha Wakiilada ee Puntland. Guddiga Doorashadu waxa uu ka kooban yahay 9 xubnood. Muddo yar ka dib golaha wakiiladu waxay soo magcaabeen afartii xubnood oo kale waaana la ansixiyey muddo kadib, waxay isla beryahaas u doorteen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Weriyihii hore Axmed Kismaayo.
Ujeedada loo asaasay Guddiga Doorashooyinka Puntland ayaa ahayd in ay u diyaarshaan nidaamka doorashada Puntland sanad ka 2019, laakiin nasiibo darro Guddigu wax weyn kama qaban shaqadii loo igmaday.
Allowba iyadoo shaqo fiican aysan wadin Guddiga Doorashooyinka Puntland ayaa Bishii November 2016 waxaa xilkii iska casilay Gudoomiyihii guddiga doorashada kumeel gaarka ee Dowlada Puntland Axmed Maxamed Cali (Axmed Kismaayo) isagoona sheegay in uu isu casilay arimo isaga u gaara.
Iscasilaadii Axmed Kismaayo waxay mudgi gelisay geedi u socodkii doorashooyinka Puntland, waxayna iscasilaadiisu sababtay in Guddigu uusan yeelay Guddoomiye muddo 9 bilooda oo xitaa aan xubintiisii la bedelin.
Bishii July 2017 ayaa madaxweynaha Puntland u magcaabay Cabdiraxmaan Diire Shuuqe xubbin ka midda guddiga doorashada oo lagu bedelay booskii Axmed Cismaayo. 30kii Bishii July 2017 ayaa Guddiga doorashooyinka kumeel gaarka ah ee Puntland (TPEC) u doorteen gudoomiyaha guddiga Cabdiraxmaan Diire Shuuqe kadib markii xilkaas uu iska casilay Axmed Maxamed Cali (Kismaanyo) 9 bilood ka hor. Cabdirixmaan Shuuqe oo madasha hadal ka jeediyey ayaa ballan qaaday inay dar dargalin doonaan howlaha shaqo ee guddiga horyaala, inkastoo ay adag tahay in uu wax bedelo taasoo ay sabab u tahay muddada yar oo ka harsan doorashada, dhaqaale xumadda iyo shaqooyinka hor yaala oo badan.
Hadaba, iyadoo doorashada madaxda Puntland ay ka harsantahay hal sano iyo shan bilood ayaa waxa adag in ay suurta gasho nidaamka hal qof hal cod maadaama aan wax yaabo badan oo loo baahnaa aan la qaban, caqabada haysta guddiga doorashiiyinkana ay badan yihiin iyo weliba Dawlada oo aanba u arkin muhiimada in la gaaro hal qof hal cod.
Maxaa loo baahan yahay si Puntland u gaarto hal qof hal cod?
Si loo gaaro nidaamka hal qof hal cod, Puntland waxay u baahan tahay in ay dhamaystirto dhamaan qodobadaan hoos ku qoran:
In la tirakoobo dadwaynaha Puntland.
In lakala xadeeyo degmooyinka iyo gobolada Puntland-maadaama marar badan la magcaabey degmooyin iyo gobolo cusub.
Diiwaan gelinta codbixiyaasha iyo sameynta kaararka aqoonsiga
Dastuur afti dadweyne lagu ansixiyey
Dhismaha Maxkamadda dastuuriga ah ee loola noqdo dhamaan khilaafaadka
Dhaqaale ku filan oo lagu geli karo doorasho dadweynuhu ka qayb-qaataan.
Hadaan qodobadaas la ansixin suurtagal manoqonayso in ay dhacdo doorasho xor iyo xalaal.
Caqabadaha hortaagan in Puntland gaarto hal qof hal cod.
Waxa jira caqabado dhowra oo horaagan nidaamka doorashada Puntland ayna ka midyihiin:
Dadweynaha oo hubaysan taasoona caqabad ku ah amniga doorashada.
Xuduudaha Puntland oo aan cadayn iyo meelo badan oo Puntland sheegato oo aysan ka talin.
Degmooyinka iyo Gobolada cusub oo aan kala xadaysnayn.
Xukuumadda Puntland oo ka cagajiidaysa fulinta nidaamkan.
Tirokooba dadweynaha Puntland oo aan lahayn.
Nidaamka oo guud ahaanba ku cusub deegaanadda Puntland.
Dastuurka Puntland oo aan loo qaadin afti dadweyne.
Maxay tahay faa’iidada aan ka dhaxli karno nidaamka hal cod hal qof?
Dhamaan wadamada horumaray waxay mar horeba hirgeliyaan nidaamka asxaabta badan ama doorasho hal qof hal cod. Hadaba, haddii Puntland ayka suurtagasho nimaadamka doorashooyinka xorta ah waxan ka dhaxlidoonaa faa’iidooyinkas soo socda:
In dadka reer Puntland doortaan qofkay u arkaan in uu katalinaayo aayaha iyo mustaqbalka Puntland.
Waxaa fududaandoona laxisaabtanka madaxa Dawlada maadaama ay yihiin kuwa dadku u dhiibteen jagada ay hayaan kana sugaaya in mar kale lasoo doorto.
Waxaa hagaagidoona shaqooyinka Dawlada maadaama Dawlada dadku la xisaabtamaayaan.
Waxa loo sinaandoonaa ka qaybqaadashada siyaada (Political Participation) iyo Dhaqaalaha (Economic freedom).
Doorashooyinka furan waxay sare u qaadaayaan xoriyada iyo demiquraadiyada.
In doorashada soo socota lagu galo nidaamkii hore ee Puntland kaasoo ahaa in Baarlamaanku doorto Madaxweynaha iyo kuxigeenkiisa, Baarlamaan kaasna lagu soo dhiso nidaamkii hore u jiray. Waa in aan la isku deyin in wakhtigaan la furu nidaamka asxaab badan casharna laga barto wixii dhacay sanadkii 2013 oo uu madaxweyne Faroole isku deyey in uu xoog ku qabto doorashada taasoo nabrihii ka dhashay aan weli ladaweyn.
In Guddiga doorashada ee hada jira shaqadiisa ka dhigto keliya in uu diyaariyo wixii nuqula oo muhiima kuwaasoo tixraac u noqonaaya Guddiyaga doorashada ee ladhisidoono wixii ka dameeya 2019-Haddii rabi dimo, ee uusan isku mashquulin qabashada doorashada 2019.
In aan la feragelin nidaamka lagu soo xulaayo Baarlamaanka Puntland 2019 si lamida tii ka dhacday Dawlada federalka ee Somaaliya 2016, loona daayo beel kasta in ay keensato cid ay u garato oo aan la oran waa la dooranaayaa xildhibaanka si la mida tii Dawlada Federaalka Somaliya.
In xildhibaanada imaandoona 2019 lagu xiro shuruudo adag oo sababikara in la soo doorto xildhibaano aqoon iyo karti leh una badan dhalinyaro.
In xukuumada imandoonta 2019 lagala shaqeeyo sidii looga gudbilahaa nidaamkaan iyaduna ka dhigato qorshaha koowaad ama ahmiyada koowaad.
In la ogaado in aan doorasho hal qof hal cod ah dhicikarin Puntland, haddaan la fulin qadobadan:
In awood buuxda la siiyo lana tayeeyo maxakamada sare Puntland.
In dhamaan shacabka reer Puntland hubka laga dhigi, maxaa yeelay inta dadku hubaynsan yihiin ma dhici karto in la qabto doorasho furan.